Raki-tsoratra Avy Amin’ny GVMeetup Ao Kairo · Global Voices teny Malagasy
Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo
Voadika ny 23 Novambra 2013 3:34 GMT
Mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. Ireo mpikambana ao amin'ny Global Voices, izay monina sy mahafantatra tsara kokoa ny fiarahamonina ao an-toerana no mitarika sy manentana amin'ny fihaonana.
Tamin'ny 16 Novambra 2013 no notontosaina ny fihaonana tao Kairo, tao amin'ny ivon-toerana “The Workshops” ao Maadi.
Mohamed El-Gohary, Mohamed Adel ary ny tenako no nandrindra ny hetsika. Matetika mihaona amin'ireo olona liana amin'ny hetsika rehetra atao ao amin'ny tontolon'ny GV izahay, saingy tsy dia fantany loatra ny fomba ahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo, ka napetraka izany fihaonana izany mba hampahafantarana amin’ ireo olona ny Global Voices sy ny tetikasany madinika, Lingua, Advox ary ny Rising Voices.
Te-hifandray amin'ireo olona izay manan-kevitra mikasika ny fomba tsara hampiasana ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ihany koa izahay, ary mitady olon-kafa hanatevin-daharana azy ireo na mitady fomba hitadiavana fanampiana ara-bola.
GVMeetup Nov 2013 avy amin'i Tarek Amr
Taorian'ny fampahafantarana fohifohy, nangataka tamin'ireo mpandray anjara izahay mba hampahafantatra ny tenany. Alefanay sioka mivantana amin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #GVMeetup ny resaky ny tsirairay mba hizarana ny rohy misy ny tetikasa, bilaogy ary ny fialam-bolin'ireo mpandray anjara.
Nianatra fanaovan-tsary ara-indostrialy ny iray tamin'ireo mpandray anjara, ary nampiseho anay ny bilaoginy, Selouk.me, izay hanoratany momba ny fampiasana sary ho entina hanovana ny fitondra-tenan'ny olona. Niresaka momba ny “famadihana ho lalao ny zava-drehetra izy hamahana olana sy hanatsaran-javatra (gamification)” ary nanasongadina hevitra ahafaha-manangana zava-baovao handrisihana ny olona tsy hanipy fako eny an-dalana.
Mpandray anjara roa hafa, mpanao gazety mpanao famotorana sy mpianatra lalàna nahita marimaritra iraisana tamin'ny firesahana ny tokony hanovàna ny lalàna mikasika ny fahalalahana hahazo vaovao ao Ejypta mba hanatontosan'ireo mpanao gazety tsara ny asany.
Mpandray anjara iray hafa kosa liana tamin'ny Rising Voices, ary te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fandehan'ny fomba fidirana ho mpikambana satria manana hevitra amin'ny sehatry ny aterineto izy mba hanampiana ny olona ao amin'ny distrikany hiresaka momba ny tsy fisian'ny sampan-draharaham-panjakana ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Mpandray anjara hafa kosa mahay momba ny fikirakirana feo sy lahatsary, ary liana tamin'ny GV podcasts. Nisy mpanatrika vitsivitsy nangataka ho mpanoratra, raha toa ka misy iray hafa mikirakira sehatra vaovao hoan'ny bilaogy, ary nifanaiky izahay ny hiresaka momba ny fahafaha-miasa miaraka any aoriana any.
Nandritra ny resadresaka nifanaovanay, niadi-hevitra momba ny maha-zava-dehibe ny lalàna “copyleft” izahay. Notsipihanay fa ny lahatsoratra GV rehetra dia avoaka amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana Creative Commons. Nampahafantatra vetivety momba ny Creative Commons sy ireo karazana fahazoan-dalana azo isafidianana i Mohamed Adel avy eo.
Nanome fampahafantarana fohy mikasika ny fomba fandrafetan'ireo mpanoratra GV ny lahatsoratra soratany avy ao amin'ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ihany koa aho.
الأصوات العالمية: من نكون. avy amin'ny Global Voices tao amin'ny Vimeo.
Nanohy niresaka hatrany izahay nandritra ny sakafo maraina sy ny sakafo atoandro. Nanatontosa lahatsary fohy momba ny Global Voices ihany koa izahay, nilaza ny fahafinaretana ao amin'izany hoe fiarahamonina midadasika manerantany tahaka ny Global Voices izany i El-Gohary.
GVMeetup tao Kairo
Nofarananay tamin'ny fizarana ny fomba fifandraisana aminay ny fihaonana ary nandrisika ireo mpanatrika izahay mba hifandray aminay hatrany raha mila soso-kevitra mikasika ny tetikasany manokana na hanavetin-daharana ny Global Voices.